Archive du 20201013
Marc Ravalomanana 6 taona izay ilay fiverenana feno mistery
13 oktobra 2014-13 oktobra 2020, feno 6 taona katroka anio ny nipotran’i Marc Ravalomanana teny amin’ny trano fonenany teny Faravohitra nilazany fahatongavany indray an-tanindrazana, rehefa voatery nitsoaka an’i Madagasikara ny martsa 2009 nisian’ny fanonganam-panjakana notarihin’ny Filoha ankehitriny Andry Rajoelina izy.
Filankevitra Monisipaly - Antananarivo Nitsivalanan’ny Prefe ny fanonganana ny birao
Ny Mpanolotsaina Monisipaly TIM no nametraka sy nangataka ny hampidirana tao anatin’ny lahadinika ny fanalana ny mpikamban’ny Birao Maharitra
Fifidianana loholona Raharahan-tokantranon’ny samy mpitondra
Nifarana omaly 12 oktobra ny fandrotsahana ny dosie ho an’ireo kandida ho loholona.
14 oktobra 2020 Andro fiasana soamantsara
Nanamafy omaly ny avy eo anivon’ny minisiteran’ny asa sy fampananan’asa ary asam-panjakana sy ny lalana sosialy fa andro fiasana soa aman-tsara rahampitso alarobia 14 oktobra 2020.
Valifaty politika Zary lasa fomba fanao mahazatra
Efa tandra vadikoditry ny mpitondra nifandimby teto ny fanenjehana ireo olona nitondra teo alohany na ireo tsy mitovy hevitra aminy, hoy ny sekretera jeneralin’ny antoko politika,
Rodoben’ny mpanohitra “Namafy izahay fa ny vahoaka mety hijinja”
Naka ny toerana maha mpanohitra azy no anton-dian’ny rodoben’ny mpanohitra ho an’ny demokrasia eto Madagasikara tany amina faritra maro tamin’ny herinandro, hoy ny tatitra fohy nataon’ny talen’ny seraseran’ity vovonana politika ity, Gaby Vakiniadiana, omaly.
Fanaovana fihetsika mamoafady Nadoboka any Tsiafahy ilay tovolahy
Any Tsiafahy no niafaran’ilay tovolahy tratra nanolana, nanao fanararaotana ara-nofo sy ara-tsaina ary nanaparitaka izany tao amin'ny tambajotran-tserasera Facebook,
Fisolokiana sy hosoka Karohina ny mpitantana ny Vaniala Export
Namoahan’ny Polisim-pirenena didy fampisamborana I Tilahy Fabio Marie Grazia lehilahy Mpitantana ny orinasa VANIALA EXPORT sy Mpanondrana lavanila. Fisolokiana, fampiasana hosoka (Abus de confiance, escroquerie, et faux et usage de faux)
Fandraisana ireo Malagasy nampodiana Hotely manodidina ny 50 isa no voaomana
Mbola ao anatin’ny fahamehana ara-pasalamana hatreto isika eto Madagasikara ary toy izany ihany koa amin’ny ankapobeny ireo firenen-kafa maneran-tany.
Ministeran’ny serasera sy ny OJM Miitatra ny disadisa sy ny fifandirana
Mitohy sy mihalalina ny lonilony eo amin’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina (MSK) andaniny, ary ny Holafitry ny Mpanao Gazety (OJM) ankilany.
Ady amin`ny kolikoly Mila finiavana ara-politika goavana
Ny taona 2010, laharana faha-123, salanisa 29,9/100, iMadagasikara amin` ny firenena 178 amin` ny ady amin` ny kolikoly. Ankehitriny, lah.
Ady amin’ny kolikoly Nahazo mpitsara roa vaovao i Mahajanga
Tontonsa omalyy tetsy amin’ny Fitsarana an-tampony ny lanonam-pitsarana manetriketrika nanaovana ny fianianan’ny lehiben’ny Tendro iraisan’ny sampan-draharaha miady amin’ny kolikoly (PAC) ao Mahajanga.
Faritra Androy Hahazo rotsak’orana ampy
Hahazo rotsak’orana ampy ary mety ho betsaka mihoatra ny mahazatra isam-bolana aza iny faritra Androy iny hatramin’ny volana desambra,
Herinaratra tsy ampy lava Vahaolana ny fitrandrahana solila mavesatra
Tao anaty herinandro maromaro dia niaina fahoriana ny mpanjifan’ny Jirama. Efa saika isan’ora dia tapaka hatrany ny herinaratra ary maharitra vao miverina, indrindra aza 24ora ny fahatapahana.
Alan’i Mikea ao Toliara Misy mandoro sy mitrandraka tsy miato
Misy mitrandraka tsy miato ny alan’i Mikea ao amin’ny kaominina ambanivohitra Manombo Atsimo, distrikan’i Toliara II mba hanaovana harina fandrehitra na saribao.
Soavina Atsimondrano Rongony 20 gony no nodorana
Rongony miisa 10 gony lehibe, notsinjaraina tanaty gony kely miisa 20 no tra-tehaky ny polisim-pirenena avy ao amin’ny PPA Soavina teny an-toerana omaly Alatsinainy.
Toamasina Tratra ireo mpanafika Cash Point
Lehilahy miisa roa isan’ny tompon’antoka amin’ny resaka fanafihana matetika miseho tao Toamasina no tratra ny 09 oktobra teo.
Tafika an-dranomasina Miaramila 11 niofana tany ivelany
Nisy ny fiofananana izay nandraisan'ny Tafika an-dRanomasina Malagasy anjara teny anivon'ny sekolin'ny tatsambo miaramila manana ny maha izy azy any ivelany.
Antsirabe Mamaky trano hatramin’ny zaza tsy ampy taona
Zazalahy miisa efatra, eo anelanelan’ny 16 ka hatramin’ny 20 taona no tra-tehaky ny polisy avy namaky trano tao amin’ny fokontanin’ Ivory Antsirabe.
Vola fisotroan-dronono Efa nanomboka ny fizarana
Somary lasa aloha ny fandoavana ny fisotroan-dronona tamin’ity volana oktobra ity. Nanomboka omaly alatsinainy 12 oktobra 2020 ny andro voalohan'ny fizarana amin'ity volana oktobra ity.
Ambohidrapeto Nampiana 2 ireo sinibe mpamatsy rano
Betsaka ireo faritra sahirana ara-drano amin’izao fiandohan’ny vanim-potoanan’ny lohataona izao.
Mpiaro ny zon’ny mpanjifa Mikaroka vahaolana momba ny faktioran’ny JIRAMA
Misy tokantrano efa nahazo sahady ilay faktioran’ny JIRAMA nandritra ny fihibohana tsy voaloa eto an-drenivohitra.
Ady amin’ny tsy fanjariantsakafo any Atsimo Niampy 30 mianadahy indray ireo dokotera sy paramed
Raha miisa 50 ireo ekipa efa nalefan’ny Ministeran’ny Fahasalamam-bahoaka hiasa sy handray an-tanana ireo olona tratran’ny tsy fanjariantsakafo any amin’ny faritra Atsimo vokatry ny kere 10 andro lasa izay dia nampiana 30 mianadahy vaovao indray izany.
Mpilalaon’ny Barea tsy tonga Hita ihany ilay fahabangana
Na dia azo lazaina ho azo hitarafana ny mety hoavin’ny ekipam-pirenena malagasin’ny baolina kitra aza ireo lalao fitsapana miisa 2 vita hatreto dia hita ihany ny fahabangan’ireo mpilalao tsy tonga niatrika ireo fampivondronana in-droa miantoana tany Luxembourg ny 9 oktobra teo sy omaly 12 oktobra tatsy Maraoka.
Coronavirus 373 sisa tsaboina
Miisa 8 ny trangana coronavirus vaovao omaly hita tamin’ny fitiliana 385, manome taham-pahavoazana 2,07% ny taham-pahavoazana, araka ny tatitry ny Pr Vololontiana Hanta.